1 year, 2 months ago 1043 Qoodi
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa dhimma hidhamuu Mohaammad Deeksisoo ilaalchisee yeroo lammataaf ibsa guyyaa har'a baaseen, Manni Murtii Aanaa magaalaa Jimmaa Mohaammad Deeksisoo fi namoota lama galmee isaatin himataman hidhaarra akka hiikaman dhaddacha Bitoteessa 07/2013 ALI ooleen kan ajaje ta'uus ammallee hidhaarra jiraachu isaani ibsuun, hatattamaan mana hidhaati akka gadi lakkifamanii fi ajaja mana murtii akka kabajamu hubachiiseera.
Kanaan dura Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dhimma Mohaammad Deeksisoo ilaalchisee ibsa Guraandhala 17, 2013 ALI baaseen, naannoo Oromiyaatti Mohaammad Deeksisoo dabalatee hidhamtoota manni murtii mirga wabii eegeefi osoo hin gadhiifamiin mana hidhaa keessatti argaman hatattamaan akka gad lakkifaman hubachiise ture. KMNI ibsa baasee kana irratti Mohaammad yeroo jalqaba qabamu poolisootaan reebicha hamaa akka irra gahee ibsees ture.
Manni Murtii Aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha Bitoteessa 07 bara 2013 ALI ooleen eebbifamtoota Yunivarsiitii Jimmaa kan turan Mohaammad Deeksisoo fi Mulugeetaa Shittoo akkasumas hojjetaa Yunivarsiiticha kan ta'an Dr Wandimmuu Laggasaa Abbaa Gaffaar wabii mataa isaaniitin akka gadi lakkifaman ajaje ture.
Haaluma beellama qabameen Bitoteessa 07 bara 2013 ALI Manni Murtii Aanaa magaalaa Jimmaa eebbifamtoota Yunivarsiitii Jimmaa kan turan Mohaammad Deeksisoo fi Mulugeetaa Shittoo akkasumas hojjetaa Yunivarsiiticha kan ta'an Dr Wandimmuu Laggasaa Abbaa Gaffaar yeroo lammataaf wabiin akka gadi lakkifaman ajaja dabarseera.
March 16, 2021, 2:51 p.m.